Canberra, renivohitr'i Aostralia | Vaovao momba ny dia
Canberra, renivohitr'i Aostralia
Mariela Carril | | Canberra, mpitarika
Canberra Azo antoka fa tsy izany no tanàna malaza indrindra any Aostralia ary tsy tafiditra amin'ny fifaninanana eo amin'i Sydney sy Melbourne, fa io no renivohitra ary mety ho liana amin'ny fahitana azy ianao.
Tanàna mahafinaritra sy mahaliana izy izay nitombo teo amin'ny aloky ny zokiny vavy, miandry ny hahafahany mampiseho izay ananany ho an'ny mpitsidika: tranombakoka, manintona, làlana miantsena, faritra gastronomic, tantara ary mponina mahafinaritra, manam-paharetana ary sariaka. ... TSARA aussie.
1 Canberra, renivohitra
2 Inona no jerena ao Canberra
3 Mihinana sy misotro any Canberra
Ny tanàna dia ao amin'ny faritra fantatra amin'ny anarana hoe Terre renivohitra Australie na ACT, any avaratra indrindra ary 280 kilometatra miala an'i Sydney ary 660 avy any Melbourne.
Nihevitra ve ianao fa lavitra ny zokiny vavy izy? Tsia, mba ho afaka hitsidika azy ianao. Niasa ho renivohitra nasionaly hatramin'ny nanombohan'ny taonjato faha-XNUMX, nanomboka tamin'ny 1908 marina, ary izy dia iray amin'ireo tanàna vitsy eto amin'ny firenena izay nomanina mialoha.
Tahaka ny renivohitra hafa amin'ireo firenena vaovao dia niseho tamin'ny endrika taratasy ny endriny an-tanàn-dehibe ary taty aoriana. Ny fombany dia noforonina tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ary ny mpandresy dia mpivady marititra amerikana.
Raha mijery sarintanin'i Canberra ny olona iray dia mahita volavola misy endrika geometrika toy ny faribolana, telozoro ary tarehimarika hafa. Ny zava-drehetra dia manaraka ny fampifanarahana ary misy toerana maitso maro, toy ny tanàna idealy sy maoderina noheverina tamin'izany fotoana izany.
Ny valiny dia a tanàna milamina sy milamina ary maitso tokoa.
Inona no jerena ao Canberra
Ny maha-renivohitra mifantoka amin'ireo tranoben'ny governemanta manan-danja indrindra: Ny Parlemanta, ny Fitsarana Tampony na ny Arisivam-pirenena, ohatra.
Ilay Parlament Ao amin'ny Capitol Hill no misy azy ary azonao atao ny mitsidika azy amin'ny fitsangatsanganana ahafahanao mahita antontan-taratasy manan-tantara, zavakanto aostralianina betsaka ary iray amin'ireo ravina lehibe indrindra eto an-tany. Mahazo fahitana tsara momba ny tanàna ihany koa ianao ary jereo ny halavan'ny 81 metatra akaiky. Misokatra isan'andro isan'andro manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva.
La fitsarana Faratampony Eo akaikin'ny Farihin'i Burley, ao amin'ny faritry ny Parlemanta. Azonao atao ny mitsidika ny efitranony telo ary mahita asa-kanto samihafa mampiseho ny fivoaran'ny firenena. Misokatra mandritra ny herinandro manomboka amin'ny 9:45 maraina ka hatramin'ny 4:30 hariva ary ny alahady manomboka amin'ny mitataovovonana ka hatramin'ny 4 hariva.
Ny manodidina anao dia afaka mitsidika ny Tranombokim-pirenen'i Aostralia. Misy fampirantiana ary afaka miditra amin'ny fitsidihana ianao na misotro kafe mijery ny farihy. Maimaimpoana ny fidirana. ny Farihy Burley Griffin Izy io dia farihy artifisialy izay aloan 'ny olona kayak na sambo na sambo na koa manjono.
Manodidina azy dia misy 40 kilometatra ny morontsiraka ary voaravaka zaridaina sy zaridaina maromaro izay ahafahanao mankafy ny eny ivelany na amin'ny cafe na trano fisakafoanana fotsiny.
Niaraka tamin'i Angletera i Aostralia tamin'ny adin'ny ady maro ka ny iray amin'ireo toerana manandanja indrindra eto an-tanàna dia ny Fahatsiarovana ny ady aostralianina, tranombakoka lehibe miaraka amin'ny fitoerana masina misy azy izay misokatra isan'andro manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 5 hariva ary ampidirina maimaimpoana.
Tiako ny mahita toerana hafahafa ka mandositra ny kilasika aho: tranombakoka sy galeria. Te hanana traikefa aho. Izany no antony anolorako hevitra anao hitsidika ireo toerana ireo:
Canberra Deep Space Communication Complex: 45 minitra avy eo Canberra izy io ary ao amin'ny Network Space Antenna International Space an'ny NASA. Ahitana fampirantiana momba ny fifandraisana misy eo amin'ny habakabaka sy i Aostralia ary maimaim-poana ny fidirana. Misokatra isan'andro manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva ary misy ny cafeteria.
Telstra Tower: karazana fomba fijery izay manome 360 ​​° fomba fijery ny faritra iray manontolo ary 195 metatra ny haavony. Misy sehatra ivelany sy galeria rakotra sy mihidy ho an'ny ririnina. Anisan'izany ny cafe, tranombakoka ary fivarotana fanomezana. Misokatra isan'andro isan'andro manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 10 alina. 3 dolara aostraliana no vidiny.
Royal Australian Mint: io no trano mandrotsaka vola, amin'ny fitsidihana mahaliana anao dia azonao atao ny mianatra ny fomba nanamboarana azy ireo, miaraka amin'ny masinina sy robot inona. Azonao atao koa ny manalefaka ny volanao manokana. Maimaimpoana ny fidirana ary amin'ny andavan'andro dia manomboka amin'ny 8 ora sy sasany ka hatramin'ny 30 hariva.
National Carillon: Fitaovana mozika goavambe izy io miaraka amina lakolosy varahina 55 milanja enina kilao ka hatramin'ny enina taonina. 50 metatra ny halavany ary fanomezana avy tany Grande-Bretagne ho an'i Aostralia raha nankalaza ny 50 taona voalohany i Canberra. Izy io dia mandray fialantsasatra amin'ny alarobia sy alahady manomboka amin'ny 12:30 ka hatramin'ny 1:20 hariva ary ny Nosy Aspen no toerana tsara indrindra hankasitrahana azy io sy hankafizanao amin'ny fahandroan-tsakafo.
Fahatsiarovana an'i Captain James Cook: Tianao ve ny jet misy rano ao Genève? Ity misy iray hafa. Na dia tsy miasa ho an'ny fikojakojana aza izy io ankehitriny, dia ao amin'ny Farihy Burley Griffin izy io ary ampahany amin'ny fahatsiarovana natokana ho an'ny mpikaroka ny ranomasina Australiana. Izy io dia natsangana tamin'ny tsingerintaona faha-roa taonan'ny andro nahatongavan'i Cook tao amin'ny firenena tamin'ny 1770.
Mihinana sy misotro any Canberra
Ny tanàna dia manana sehatry ny sakafo mahafinaritra trano fisakafoanana sy kafe maro. Aleo tadidintsika fa firenena maro kolotsaina i Aostralia noho izany dia manana solontena avokoa ny sakafo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary aza adino fa ny divay dia novokarina teto ka misy famiazam-boaloboka sy divay manandrana.
Safidy roa divay: ny Tanimboaloboka efatra, any Murrumbateman, 30 minitra monja avy any Canberra, amin'ny toerana mahafinaritra. Manana cafe sy trano fisakafoanana izy ireo ary afaka mitsidika ianao amin'ny faran'ny herinandro sy fialantsasatra manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 5 hariva ary manandrana divay manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 3 hariva miaraka amin'ny lovia manodidina ny $ 20.
Safidy iray hafa dia Vineyards Hill's Survevyor izay mahatonga an'i Pinor Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz ary maro hafa. Sahabo ho 550 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina izy ireo izay nisy volkano taloha. Misokatra ihany koa amin'ny faran'ny herinandro sy fialantsasatra manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Ary misy bistro mahafinaritra ahafahanao misakafo antoandro.
Fivarotana kafe? Mpankafy kafe ny aostraliana Ary androany, toy ny manerana an'izao tontolo izao, ny kafe sy ny kafe mangatsiaka no filaminan'ny andro. Ho hitanao izy ireo na aiza na aiza nefa soraty ity anarana ity: Ona Coffe House. Eo an-dohany ny Tompondakan'i Barista Aostraliana 2016, Hugh Kelly ary tompon-daka tamin'ny 2015, Sasa Sestic. Hitanao izany ao amin'ny 68 Wollongong Street, Fyshwick.
Ny marina dia tsy azo atao ny mamerina mijery ny zava-drehetra, fa ny tsara momba ny renivohitra Aostralianina dia avy amin'ny tranokalany dia afaka mampifandray amin'ny Googel Play na App Store ianao ary misintona fampiharana azo ampiharina fampiharana ho fizahan-tany any Canberra.
Momba izany Zava-tsoa iray mifandimby ary fampiharana feno be izy miaraka amin'i horonan-tsary maro izay nalaina horonantsary tao anatin'ny 20 minitra avy, na kely kokoa. Izy rehetra dia samy manomana drafitra fitsangatsanganana tsara indrindra ao an-tanàna, zavatra tsy tokony halainao raha mankany Aostralia ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Canberra » Canberra, renivohitr'i Aostralia
Ireo toerana 7 tsara indrindra eto Italia
Tetezana 5 tsy manam-paharoa izay te-hanao selfie